गोपालकाजी कायस्थको कसले खायो ६३ लाख ? -FilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
गोपालकाजी कायस्थको कसले खायो ६३ लाख ?
ऋषि धमलाले दिएनन् ९ लाख
फिल्मी फण्डा । नेपाली फिल्म क्षेत्रमा पछिल्लो समय फिल्मको व्यापारलाई लिएर निर्माता, वितरक र फिल्म हलवालाहरुको कारोवार वारे छताछुल्ल भएको छ । एक पक्षले अर्को पक्षलाई आरोप र प्रत्यारोप लगाईरहँदा निर्माताहरु सबैभन्दा बढि समस्यामा परेका छन् ।
केही वितरकहरुले भने आफुहरु पनि निर्माताबाट पीडित भएको दावी गरेका छन् । हालै फिल्म ‘छ माया छप्पकै’का निर्माता रोहित अधिकारीले केही हल र एफडी कम्पनीबाट करोडौं रुपैयाँ लिन नसकेको दावी गरेका थिए । उनले वितरक गोपालकाजी कायस्थ संचालक रहेको हलबाट समेत रकम नपाएको दावी गरेका थिए ।
तर वितरक गोपाल काजी कायस्थले भने ‘छ माया छपक्कै’लाई कुनै पनि पैसा दिन बाँकी नरहेको दावी गरे । निर्माता अधिकारीले कसैको चरित्र हत्या गर्ने तरिकाले गलत समाचार दिएको वितरक कायस्थको दावी छ । यसैमा थप्दै रोहित अधिकारीले भने अनावश्यक कमिशन कटाएको र सो कटाउँदा पनि अझै ७० हजार कायस्थले नदिएको दावी गरे ।
गोपाल काजी कायस्थ बिके फिल्मस्का प्रबन्ध निर्देशक हुन् । दशकौंदेखि फिल्म वितरणमा लागेको कायस्थले आफुले निर्माताबाट लाखौं रुपैयाँ उठाउन बाँकी रहेको फिल्मी फण्डासँग बताए । उनले सानातिना रकम गरेर १ करोड पचास लाख उठाउन बाँकी रहेको दावी गरेपनि फिल्मको सूची हेर्दा ६३ लाख मात्रै उठाउनु पर्ने देखिन्छ ।
उनले फिल्म ‘जय शम्भु’बाट १९ लाख, ‘विराङ्गाना’बाट १८ लाख, ‘चौका दाऊ’बाट ४ लाख, ऋषि धमलाको फिल्म ‘अनुराग’बाट ९ लाख र ‘सूश्री सम्पत्ति’बाट १३ लाख उठाउन बाँकी भएको बताएका छन् । फिल्म वितरणका बेला सम्झौता गर्दा दिएको रकम फिल्म फ्लप भएपछि निर्माताहरु सम्पर्कमा नआउँदा पैसा उठाउन नसकिएको उनले बताए ।
लगातार फिल्म बनाउने निर्माताहरुबाट पछि पनि फिल्म वितरण गरि रकम उठाउन सकिने तर, एक फिल्मबाटै हराउने निर्माताबाट रकम उठाउन मुश्किल भएको उनले बताए । त्यस्ता निर्माताहरुका लागि भने सम्झौता पत्र अनुसार कानुनी दायरामा जाने समेत उनले बताएका छन् ।
वितरक कायस्थले काठमाडौंका विभिन्न हलहरुबाट मात्रै ६० लाख बढि रकम उठाउन बाँकी रहेको बताएका छन् । हलको नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा उनले कुन हलबाट कति रकम भन्ने वारे जानकारी दिएका छन् ।
जसमा मल्टिप्लेक्स देखि सिंगल थिएटरका ठूला भनिएका हलहरु समावेश छ । हलको नाम सार्वजनिक गर्दा भोलीका दिनमा वितरणबाटै पलायन हुनुपर्ने हुनसक्छ भन्दै उनले हलको नाम उल्लेख नगर्न अनुरोध गरे ।
यसरी वितरकहरु पनि समस्यामा रहेको भन्दै सबै व्यवसायिक रुपमा इमान्दार बन्न सके फिल्म क्षेत्र माथी उठ्ने उनले बताए । अन्यथा यस्तो खालको समस्या निरन्तर देखिरहने उनको तर्क छ ।
यस्ता खालका आरोप र प्रत्यारोपलाई संलग्न पक्षहरुको उपस्थितीमा आन्तरिक रुपमै विवाद मिलाउन सके समस्या समाधान हुन्थ्यो । अन्यथा फिल्म क्षेत्रको नकरात्मक वारेमा आम मानिस र दर्शकलाई जानकारी दिदाँ विकृती मात्रै बढ्नेछ । यसमा सबैको चेत खुलोस् ।